(src)="1.1"> Tontolo Arabo : Taona Iray An-ttsary - Ny Fantin 'ireo Mpanoratray
(src)="1.2"> Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin 'ny fandrakofanay manokana ny :
(src)="5.1"> Hetsi-panoherana Bahrain 2011 Revolisiona Ejipta 2011 Hetsi-panoherana Maraoka 2011 Hetsi-panoherana Syria 2011 Revolisiona Tonizian 2011 Hetsi-panoherana Yemen 2011
(src)="12.1"> Hatramin 'ny nandoroan 'ilay Tanora Toniziana , Mohamed Bouazizi , mpivaro-boankazo ny tenany tao an-tanàna kelin 'i Sidi Bouzid tamin 'ny Desambra 2010 , dia onjam-panoheram-bahoaka iray tsy mbola nisy toy izany no nitsoka tany amin 'ny tontolo Arabo .
(src)="12.2"> Nanatri-maso hetsika tsy mbola fahita sy tsy nisy noeritreretiny ny hatrehana mihitsy teo amin 'ny fiainany ny tsirairay .
(src)="13.1"> Arabo telo mpanao didy jadona no voaongana , ny sasany voatery niditra tamin 'ny fanaovana fanovàna , raha ny tany an-toeran-kafa kosa indray dia namaivay sy feno rà nandriaka ny fifanandrinana .
(src)="14.1"> Fa amin 'izany , 2011 dia tahaka ny mijanona ho raiki-tampisaka ao anatin 'ny tantaran 'ny tontolo Arabo sahala amin 'ny taona nanombohan 'ny vahoaka nitsangana hanohitra ny fitondrana tsy refesi-mandidy nifehy azy ireo .
(src)="15.1"> Satria nataontsika veloma mandrakizay ny taona 2011 ary mibanjina indray ny taona 2012 , dia nangataka ireo mpanoratray izahay mba hizara aminareo ireo sary izay manamarika iny taona lasa iny eo imason-dry zareo tany amin 'ny fireneny isanisany avy .
(src)="15.2"> Ity fantina manaraka ity no maneho ny safidin 'izy ireo .
(src)="17.1"> Sary avy amin 'i Talel Nacer , nampiasaina rehefa nahazoana alàlana
(src)="18.1"> Tamin 'ny 14 Janoary 2011 dia an 'arivony ireo mpano hetsi-panoherana nifamory teo akaikin 'ny tranoben 'ny Ministeran 'ny Atitany tao Tunis nangataka ny fialàn 'ny fitondràn 'ilay mpanao jadona Zeine El Abidine Ben Ali .
(src)="18.2"> Taoriana kely tamin 'io andro io ihany , nandositra nankany Arabia Saodita i Ben Ali .
(src)="19.1"> Afef Abroughi
(src)="21.1"> mpanoratra tsy fantatra anarana
(src)="22.1"> Hafatra mafonja iray avy amin 'ny " tanànan 'i Kafar Nabel natao fahirano " , Syria .
(src)="23.1"> Leila Nachawati
(src)="25.1"> Sary avy amin 'i KrikOrion , nampioasaina rehefa nahazoana alàlana
(src)="26.1"> Na dia tsy niatrika revolisiona aza i Libanona tamin 'ny 2011 , ilay tanin 'ny Cèdres dia nizaka mafy ihany koa ny fivoaran-draharaha sy fiantraikan 'ny sahotaka tany amin 'ny faritra .
(src)="26.2"> Saingy ho an 'ireo Libane dia ny findangan 'ny vidim-piainana no tena nanahirana azy ireo betsaka .
(src)="26.3"> Manaraka hatrany ny fampiakarana karama ataon 'ny governemanta ary na ny talohan 'ny naneken 'ny parlemanta ny drafitra aza , misondrotra tsy misy toy izany ny vidin-javatra .
(src)="27.1"> Thalia Rahme
(src)="29.1"> Sary avy amin 'i Jillian C. York , nampiasaina eo ambany CC license ( CC BY-NC-SA 2.0 )
(src)="30.1"> Palestina : " Miara-mizotra Ho amin 'ny Fahalalahana "
(src)="31.1"> Jillian C. York
(src)="33.1"> Fizakà-manana Shohdi Al-Sofi , nampiasaina rehefa nahazoana alàlana
(src)="34.1"> Ireo diabe am-pilaminana tao Yemen izay tsy nitsahatra mihitsy nandritra ny taona no vavolombelona iray amin 'ny maha-tsy azo hozongozonina sy ny fahavononan 'ny Yemenita ary manaporofo , tahaka izay mivaky eo amin 'ilay takelaka be , hoe " an 'ny vahoaka ny fandresena " .
(src)="35.1"> Noon Arabia
(src)="37.1"> Sary nalefan 'i @ almakna tao amin 'ny Twitter
(src)="38.1"> Ny sary etsy ambony , nozarain 'i @ almakna tao amin 'ny Twitter , dia maneho ny isan 'ireo faritra voalaza fa voadaroka baomba mandatsa-dranomaso , nataon 'ny manampahefana tao Bahrain tanatin 'ny alina iray monja .
(src)="38.2"> Tamin 'io andro io indrindra , na izaho manokana aza dia mba sempotry ny entona mandatsa-dranomaso , nandany ny alina sy ny andro manaraka io tamin 'ny faharariana sy fanarahana akaiky ireo bitsika aman-tarainan 'ny mpampiasa Twitter avy amin 'ny faritra rehetra nanerana ny firenena .
(src)="39.1"> Amira Al Hussaini
(src)="40.1"> Sary nakarin 'i @ SanabisVoice tao amin 'ny Twitter
(src)="41.1"> Ity sary avy amin 'i Sanabis Voice ity dia maneho ireo fononà baomba mandratsa-dranomaso avy nampiasaina , nangonina tamin 'ny faritra kely iray , tao anatin 'ny andro iray .
(src)="41.2"> Sary toy itony no hita mameno ny aterineto , ifampizaràn 'ireo mpiondana aterineto any anaty tambajotra sosialy any , ary milaza tantara iray izay marina nandritra ny 11 volana - tantara iray tsy dia nahataitra loatra an 'izao tontolo izao .
(src)="42.1"> Amira Al Hussaini
(src)="44.1"> sary avy amin 'i rouelshimi , nampiasaina eo ambanin 'ny CC license ( CC BY-NC-SA 2.0 )
(src)="45.1"> 25 Janoary , ny onjam-panoherana voalohany nandeha ho ao aminn 'y kianja Tahrir .
(src)="45.2"> Io no ilay vao mangiran-dratsin 'ny revolisiona .
(src)="46.1"> Tarek Amr
(src)="49.1"> Fizakà-manana Amine Hachimoto. nampiasaina rehefa nahazoana alàlana .
(src)="50.1"> Ilay ankizivavikely miandrandra mijery ity Superman Maraokana miantrana manoloana ny parlemanta ity dia tahaka ny manontany tena raha afaka manidina ilay zalahy io .
(src)="50.2"> Mety ho ' ultra-nationaliste ' miezaka manangona isa ve izy ?
(src)="50.3"> Na angamba mety ho mpanohana ny vondrona 20 Febroary mpandàla ny fanovàna ?
(src)="50.4"> Tsy dia olana izany .
(src)="50.5"> Satria ao ambadik 'io sary mahatsikaiky avy amin 'i Amine Hachimoto io no misy ny tena zava-marina iainana ao Maraoka : 2011 no taona nampanjary ho sehatry ny fanehoan-kevitra politika tam-pilaminana ny arabe .
(src)="50.6"> Zavatra izay toa mbola hitohy amin 'ity taona vao miandoha ity .
(src)="51.1"> Hisham Almiraat
(src)="1.2"> Gnaid , afovoany , miaraka amin 'ny zanany vavikely vao teraka sy ny fianakaviany .
(src)="1.3"> Nahazoana alàlana .
(src)="2.1"> " Velona i Aleppo Ary Tsy Ho Faty ! "
(src)="3.1"> Izany no nosoratan 'i Gnaid mpanao gazety mpamokatra lahatsary tao amin 'ny Facebook rehefa nanambara ny fahaterahan 'ny ny zanany vavikely izy , izay zanany faharoa , tamin 'ny Alakamisy , 24 Novambra 2016 .
(src)="4.1"> Miasa miaraka amin 'ny vondrona mpikatroka fampitam-baovao ( AMC ) Foibe Fampitam-baovao ao Aleppo i Gnaid any amin 'ny faritra atsinanan 'ny tanànan 'i Aleppo any Syria .
(src)="4.2"> Manana fifandraisana aterineto tsindraindray amin 'ny alalan 'ny zanabolana izy ary afaka mifandray amin 'ny Global Voices avy amin 'izany .
(src)="4.3"> Miara-mipetraka amin 'ny vadiny , ny zanany lahy , sy ny zanany vavikely vao teraka ary ny havany roa izy .
(src)="5.1"> Teraka sy nihalehibe tao anatin 'ny ady ireo zanany roa .
(src)="5.2"> Tamin 'ny herinandro lasa teo , nilaza tamin 'ny Global Voices tamin 'ny andianà fifandraisana i Gnaid fa roa kilometatra monja miala amin 'ny tranony no misy ny tafiky ny fitondrana Syriana , ary matahotra mafy ny olon-tsotra sy ireo matihanina amin 'ny fampitam-baovao izay mbola any atsinanan 'i Aleppo .
(src)="6.1"> Tamin 'ny fotoana nanoratana , voalaza fa mifehy ny ankamaroan 'ny faritra atsinanan 'i Aleppo ny tafika izay manohana ny Filoha Bashar al-Assad rehefa nanao fandrosoana haingana tao anatin 'ny andro vitsivitsy noho ny daroka baomba Rosiana sy ny fanohanana lehibe avy amin 'ny milisy tohanan 'ny Iraniana .
(src)="6.2"> Nanomboka tamin 'ny taona 2012 , nizara roa ny tanàna ka an 'ny mpioko ny atsinanan 'i Aleppo ary an 'ny fitondrana ny ao andrefan 'ny Aleppo .
(src)="6.3"> Tamin 'ny Desambra 2013 no nandatsahan 'ny fitondrana ny baomba barika voalohany tao Aleppo , ary nanomboka teo dia maro ny karazana fitaovam-piadiana nampiasaina , nanomboka tamin 'ny fitaovam-piadiana simika ka hatramin 'ny baomba mitsipotipotika , ary nahatonga ny faritra atsinanan 'ny tanàndehibe ho rava tanteraka .
(src)="6.4"> Nametraka fahirano feno herisetra ny fitondrana avy eo tamin 'ny Jolay 2016 satria nanambara ny fikasany haka indray ny atsinanan 'i Aleppo ao anatin 'ny volana vitsivitsy izy .
(src)="7.1"> Tojo sakana maro i Gnaid sy ny fianakaviany rehefa nieritreritra ny hiala tao atsinanan 'i Aleppo .
(src)="7.2"> Sarotra ny fandehanana ao Torkia mpifanolo-bodirindrina , ary atahorana ho an 'ny mpikatroka ara-pampitam-baovao matahotra fisamborana , fampijaliana na fahafatesana mihitsy aza ny faritra ao Syria tazonin 'ny fitondrana .
(src)="7.3"> Nanamarika i Gnaid fa raha mitolo-batana sy mitondra ny sarin 'i Assad izy dia ho velona , kanefa tsy manaiky izany ny reharehany sy ny fahamendrehany .
(src)="7.4"> Mampietry loatra izany hoy izy tamin 'ny Global Voices .
(src)="7.5"> Nanapa-kevitra ny hijanona any amin 'ny faritra atsinanan 'i Aleppo noho izany i Gnaid sy ny fianakaviany .
(src)="8.1"> " Mipoaka mafy ny baomba androany alina " hoy i Gnaid tamin 'ny Alarobia 7 Desambra .
(src)="8.2"> " Mampihorohoro sy mampatahotra , lasa tanànan 'ny horohoro i Aleppo . "
(src)="8.3"> Miampanga ny vondrom-piarahamonina iraisampirenena izy noho ny tsy fieritreretana " ny maha-olombelona " :
(src)="8.4"> Tsy manana pasipaoro izaho sy ny vadiko .
(src)="8.5"> Tsy afaka mifindra toerana izahay , kanefa afaka mivelona eto Aleppo ihany , na dia nandritra ny ady aza .
(src)="8.6"> Misy ny vahaolana ankehitriny .
(src)="8.7"> Zonay ny miaina am-pahamendrehana sy am-pahalalahana , toy ny olona rehetra eto amin 'izao tontolo izao .
(src)="8.8"> Saingy indrisy tsy re ny feonay noho ny tabataban 'ny fitaovam-piadiana !
(src)="8.9"> Olona maro no namoy ny tranony ary noroahina tamin-kerisetra sy baomba .
(src)="8.10"> Angamba hiverina amin 'ny fitondrana ny eto amin 'ny manodidina anay .
(src)="8.11"> Kanefa hifikitra eto amin 'ny taninay izahay !
(src)="8.12"> An 'ny Firenena Mikambana sy ny fikambanana iraisam-pirenena rehetra ny henatra izay tokony hamonjy ireo naratra kanefa nanda ny hanao izany !
(src)="8.13"> Nandefa hafatra iray hafa i Gnaid avy eo :
(src)="8.14"> Tena sarotra ny toe-draharaha .
(src)="8.15"> Tsy hitako izay holazaina .
(src)="8.16"> Mijery ireo vahoaka aho .
(src)="8.17"> Tsy te-hiala eto aho .
(src)="8.18"> Tsy te handao an 'i Aleppo aho .
(src)="8.19"> Reraka aho ary drodroka tanteraka .
(src)="8.20"> Kanefa tsy misy azoko atao afa-tsy ny mijanona .
(src)="8.21"> Eto ny taniko .
(src)="8.22"> Tsy misy zavatra hafa ho ahy ankoatra an 'i Aleppo .
(src)="8.23"> Tsy fantatro intsony izay tokony hatao .
(src)="8.24"> Eo am-pelatanan 'Andriamanitra izany .
(src)="8.25"> Farany , tamin 'ny Alakamisy 8 Desambra , nandefa izay noheveriny fa hafatra farany i Gnaid .
(src)="8.26"> Antsasakadiny lasa izay no nanomboka ny ady teto .
(src)="8.27"> Misy ny sahotaka goavana .
(src)="8.28"> Indrindra amin 'ny ankizy .
(src)="8.29"> Tena sarotra dia sarotra ankehitriny .
(src)="8.30"> Misy ny fanafihana amin 'ny alalan 'ny balafomanga ataon 'ny tafika Syriana .
(src)="8.31"> Tsy ho ela dia ho raikitra ny ady ankehitriny .
(src)="8.32"> Soa ihany fa nahavita nandefa raki-peo fanamarihana fohy taty amin 'ny Global Voices ny marainan 'ny Talata 13 Desambra izy , nanao hoe :
(src)="8.33"> Misaotra an 'Andriamanitra fa tsy maty fo aman 'aina izahay .